रेगे अन! नयाँ कर्फ्यू नियमहरु को बावजुद जमैका पर्यटन सुरक्षित
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » जमैका ताजा समाचार » रेगे अन! नयाँ कर्फ्यू नियमहरु को बावजुद जमैका पर्यटन सुरक्षित
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • क्यारिबियन • सरकारी समाचार • होटल र रिसोर्टहरू • जमैका ताजा समाचार • समाचार • पुनर्निर्माण • जिम्मेवार • सुरक्षा • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार
जमैकाका प्रधानमन्त्री माइकल होलनेसले आज घोषणा गरेको नयाँ कर्फ्यू नियमनको बावजुद स्यान्डल र समुद्री किनार समूह जस्ता संसारका केहि सुरक्षित सबै समावेशी रिसोर्टहरु संगै जमैका मा पर्यटन बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका कोभिड -१ spread फैलिएको तुलनामा, मृत्युको संख्या, जमैका राम्रो गरिरहेको छ। गणना प्रति मिलियन जनसंख्या जमैका संयुक्त राज्य अमेरिका पोस्टियन 19 को तुलना मा, दुनिया मा 123 स्थान मा छ।
जमैका कम्तिमा प्रशासित छ 369,960 कोभिड खोप को खुराक अब सम्म। मानीस प्रत्येक व्यक्ति २ डोज को जरूरत छ, कि पर्याप्त को बारे मा खोपिएको छ 6.3% देशको जनसंख्या को। यो संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी ५०% भन्दा बढी को दर को तुलना मा एक कम संख्या हो।
पछिल्लो हप्ता रिपोर्ट को दौरान, जमैका को बारे मा औसत ४, 4,933 ३३ खुराक प्रशासित प्रत्येक दिन। त्यो दर मा, यो एक थप लिन्छ 120 दिन जनसंख्या को अर्को १०% को लागी पर्याप्त खुराक प्रशासन गर्न।
जबकि सीमाहरु समय मा खुला रहन्छन्, र पर्यटन फिर्ता भएको छ यो क्यारिबियन टापु देश मा, एक नयाँ कर्फ्यू राखिएको थियो अगस्त ११ देखि अगस्त ३१ सम्म।
खतरनाक को रूप मा यो लाग्दछ, यो धेरै राम्रो संग धेरै धेरै समावेशी रिसोर्ट्स मा एक जमैका छुट्टी को मजा ले आगन्तुकहरु को लागी एक ठूलो फरक हुन सक्दैन। जुत्ता, तर यो जमैकाका प्रधानमन्त्री माइकल होलनेसको स्पष्ट चेतावनी हो, कि COVID-१ of को खतरा वास्तविक छ र सम्बोधन भइरहेको छ।
अमेरिकी विदेश विभागले जमैकामा छुट्टी मनाइरहेका अमेरिकीहरुलाई यात्रा गर्नु अघि पूर्ण खोप लगाउन आग्रह गरेको छ।
रोग नियन्त्रण र रोकथाम को लागी अमेरिकी केन्द्रहरु (सीडीसी) एक स्तर ३ यात्रा स्वास्थ्य जारी गरेको छ जमैका को लागी सूचना कोभिड १ to को कारणले देश मा कोभिड १ of को उच्च स्तर को संकेत गर्दछ। यो भन्छ: "कोभिड -१ ing को संक्रामक हुने र गम्भीर लक्षणहरु को विकास को तपाइँको जोखिम कम हुन सक्छ यदि तपाइँ एक संग खोप लगाइएको छ एफडीए अधिकृत खोप। “
आज जमैकाका प्रधानमन्त्री एन्ड्र्यू होलनेसले विपद् जोखिम व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत संशोधित कोविड १ prot प्रोटोकल घोषणा गरेका छन्।
आज एक डिजिटल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै होलनेसले भने कि नयाँ उपायहरु बुधवार, अगस्त ११ देखि अगस्ट ३१ सम्म तीन हप्ता को अवधि को लागी लागू हुनेछन्।
उनले घोषणा गरे कि अगस्त ११ देखि राती कर्फ्यू को समय सोमबार देखि शुक्रवार सम्म साँझ to बजे देखि बिहान ५ बजे सम्म चल्नेछ।
#बिहे - कुनै पचास भन्दा बढी व्यक्तिहरु शारीरिक रूप मा एक विवाह मा भाग लिन को लागी अनुमति दिइनेछ।
संस्थाहरु को वार्षिक र असाधारण सामान्य बैठकहरु को लागी, शारीरिक रूप मा उपस्थित हुन अनुमति दिइएको व्यक्तिहरुको अधिकतम संख्या ५० हो। pic.twitter.com/So7oDMOCUe
- एन्ड्र्यू होलिनेस (@ एन्ड्र्यूहोलनेसजेएम) अगस्ट 10, 2021
शनिबार कर्फ्यू भोलिपल्ट साँझ6बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म र आइतबार कर्फ्यू भोलिपल्ट २ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चल्नेछ।
व्यवसायहरु कर्फ्यू समय भन्दा एक घण्टा पहिले बन्द गर्न आवश्यक छ।
अन्य उपायहरु हाल प्रधानमन्त्री द्वारा प्रकट गरीरहेका छन्।
पछिल्लो बिहीबार देखि, दैनिक COVID-19 केसहरु को संख्या २०० लाई पार गरीएको छ, र तीन दिन को लागी, यो ३०० भन्दा बढि मामिलाहरुमा पुग्यो। अस्पतालहरु पनि दबाबमा छन् किनकि ओछ्यान खाली ठाउँहरु सीमित छन्।
यसअघि होलनेसले १ 19 ०३ अगस्ट १ र अगस्ट between को बिचमा नयाँ भाइरसका केसहरु दर्ता भएको खुलासा गरी जमैकाको कोभिड -१ situation को स्थिति को एक भयानक चित्र कोरेका थिए।
नतिजाको रूपमा, २३238 कोभिड केसहरु प्रति दिन औसत मा रेकर्ड गरिएको छ।
होलनेसले सामाजिक दुरी र कर्फ्यू उपायहरुको पालना लगायत कोभिड १ prot प्रोटोकलको पालना नगर्ने जमैकाहरुको वृद्धिलाई दोषी ठहराए।
"यस प्रकारको व्यवहारले मामिलामा बृद्धि गराउनेछ," उनले भने, सरकारले मुद्दाहरुमा बृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो, जसको परिणामस्वरूप भाइरस नियन्त्रणका उपायहरु कडाइका साथ कडा बनाइयो।
eTurboNews माननीय सम्म पुग्यो। पर्यटन मन्त्री एडमण्ड बार्टलेट स्पष्टीकरण को लागी, तर एक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न असमर्थ थियो, र अपडेट हुनेछ एक पटक फेरि थाहा छ।
कोहि पनि सुरक्षित छैन जब सम्म हामी सबै सुरक्षित छौं अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन द्वारा मात्र मूल्या assessment्कन छैन, तर यो द्वारा एडमण्ड बार्टलेट, जमैकाका पर्यटन मन्त्री। उनी दृढ विश्वास गर्छन् कि सबैलाई खोपको विश्वव्यापी वितरण कुञ्जी हो। श्री बार्टलेट भ्याक्सिन वितरण बढाउन नसक्ने गरी जमैका जस्ता यात्रा र पर्यटन उद्योग मा विशेष गरी देशहरुको हानि को लागी लडिरहेका छन्।
सबैभन्दा माननीय एन्ड्रयू माइकल होलन्स पहिलो पटक संसद सदस्य (MP) को रूपमा निर्वाचित हुनुभयो पश्चिम मध्य सेन्ट एन्ड्रयू को निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व गर्न को लागी 1997 मा, 25 वर्षको उमेर मा। जमैका लेबर पार्टीले फेब्रुअरी २५, २०१ on मा भएको चुनावमा पीपुल्स नेशनल पार्टीलाई पराजित गरेपछि प्रधानमन्त्री।